Baarlamaanka Turkiga oo Meel mariyay heshiis Melleteriga Turkiga u ogolaanaya in uu ujihaysto dalka Liibiya.
Saturday December 21, 2019 - 18:57:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib kulan degdeg ah oo magaalada Anqara ay ku yeesheen xildhibaannada baarlamaanka dowladda Turkiga ayay ansixiyeen Heshiis dhanka amniga iyo Melleteriga ah oo dhowaan dhaxmaray Xukuumadda Liibiya iyo Turkiga.
Xildhibaannada Turkiga ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay in laga shaqeysiiyo heshiiskan oo lagu sheegay mid awood dhanka dhaqaalaha iyo melleteriga Siinaya labada dowladood ee saxiixay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa usheegay warbaahinta afka dowladda ku hadasha in nuqullada heshiiska ay ugudbiyeen madaxtooyada Turkiga si Erdogaan uu usaxiixo kadibna si rasmi ah loo dhaqan geliyo.
Heshiiskan uu baarlamaanka Turkiga meel mariyay ayaa dhigaya in kumanaan ciidamo Turki ah loo diro wadanka Liibiya si ay ubadbaadiyaan xukuumadda Alwifaaq ee Ururka Ikhwaanka uu hoggaamiyo iyo in labada dowladood ay wada difaacdaan xuduud badeedka ka dhaxeeya.
Turkiga ayaa doonaya in uu dagaal dhanka awoodda ah lagalo dowladaha Gariigga iyo Masar oo wado sahamo ay shidaal uga baarayaan badda Mediterranean-ka.
Erdogaan ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay in kumanaan askari uu udiri doono wadanka Liibiya si ay uxoojiyaan wax uu ugu yeeray dowladda Sharciga ah oo uu ula jeedo xukuumadda Alwiqaaf ee cadaadiska kala kulmaysa Khaliifa Xaftar iyo dowladaha taageerada siiya.